Akwụkwọ 8 iji tinye ụtọ dị ụtọ ma dị ụtọ n'ọnụ gị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ 8 iji tinye ụtọ dị ụtọ ma dị ụtọ n'ọnụ gị
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Novela, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Anyị akwụsịbeghị nsogbu ndị ahụ, ma anyị ga-emerịrị ya nweta ezigbo uto azụ ihe obula. Ihe akwụkwọ ha bụ ezigbo nhọrọ ịchọta ya. Nke a bụ nhọrọ nke Isi 8 - Site na ndị ochie na ndị na - ere ahịa n'oge na - adịbeghị anya - ebe ụtọ ma ọ bụ nnu nnu na-erute na akụkọ ha.
1 Onye osi nri nke Castamar - Juan M. Núñez
2 Mgbakọ Chocolate - Maria Nikolai
3 Violet agụụ - Martine Bailey
4 Lemọn achịcha na poppy osisi - Cristina Campos
5 Dị ka mmiri maka chocolate - Laura Esquivel
6 N'etiti uzuzu na cinnamon - Eli Brown
7 Orange Ise Nkeji Iri Ise - Joanne Harris
8 Achịcha almọnd na ịhụnanya - Ángela Vallvey
Onye osi nri nke Castamar - Juan M. Núñez
Anyị na-amalite na akụkọ a na Spain 1720 ya na ihe di iche iche nke okike: nduhie, ihunanya, ekworo, ihe nzuzo na ugha. Kpakpando Clara, bu nwa agbogho si na amara, onye na ata ahuhu emeraphobia ebe ọ bụ na nna ya nwụrụ na mberede. Bụ a magburu onwe osi nri na ekele nke a ọ na-ejisie ike nweta Duchy nke Castamar.
Ebe ahụ ewe iwe ịdị jụụ na enweghị mmasị ịdị adị nke Don Diego, ndị Duke, bụ onye nwụnahụrụ nwunye ya n'ihe ọghọm, na-ebi naanị ya na naanị ya gbara ọrụ ahụ gburugburu. Ma n'oge na-adịghị anya Clara ga-achọpụta na udo a nwere ike ịfụ.
Ọ ghọrọ Ngalaba telivishọn nke 8 isi nke A3Media mere na nke mbu na onwa a.
Ebe obibi nke chọkọleti - Maria Nikolai
Otu n'ime ihe kachasị ọhụrụ kacha ere ezigbo onye edemede German a dere ihunanya akụkọ ihe mere eme akwụkwọ akụkọ.
Dị na mmalite nke narị afọ nke XNUMX na Stuttgart, nwere dị ka protagonist Judith Rothmann kwuru, ada nke oganihu onye na-eme chocolate. N'ịbụ onye a kara aka ime ezigbo alụmdi na nwunye ma mụọ ụmụ iji nweta ihe nketa ya, ọ ga-enwe ebumnuche ndị ọzọ, dị ka nke nọrọ n'ọkwá dị mkpa na ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, ịlụ di ma ọ bụ nwunye n’enweghị ịhụnanya abụghị akụkụ nke atụmatụ ha.
N'otu oge ahụ, nne ya, Hélène, nweere onwe ya ma nwee mmụọ siri ike, ọ na-eme ọgwụgwọ na-ezu ike na Lake Garda ma ebe ahụ ọ chọpụtara na ọ ka nwere oge gbanwee ndụ gị gbachapụrụ agbachapụ na Germany site na otu nnwere onwe ọzọ na Italia.
Agụụ violet - Martine Bailey
Anyị anaghị esi na nnukwu ụlọ obibi ma ọ bụ ihe ụtọ dị na kichin na akụkọ ọzọ edepụtara na ha. Ebe a bụ mansion Halllọ Mawton a na-akpo onye mbu Biddy leigh, na-enweghị isi osote onye na-esi nri, Onye chọrọ ịmalite ezinụlọ na Jem Burdett wee mepee ụlọ obibi nke aka ya. Ma olee mgbe sir geoffrey, onye nwe ya ochie, lụọ ndị na-eto eto na enigmatic Lady carinna, Biddy tinyere aka na ntanetị nke aghụghọ, ihe nzuzo na ụgha, yana njem ịtali na etiti.
Lemọn achịcha na poppy osisi - Cristina Campos
Ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na edemede na ọbụna onye nduzi Benito zambrano ejiriwo ya ụdị ihe nkiri, gbagburu na Mallorca, ebe nkata ahụ na-eme. N'ebe ahụ, n'ime obere ime obodo, Anna na Marina, abụọ ụmụnne nwanyị kewapụrụ n'oge ha bụ nwata, ha na-ezute ọzọ iji ree a ebe a na-eme bred na ha ketara site na nwanyi di omimi onye ha chere na ha amaghi. Nwere ndụ dị nnọọ iche Mgbe Anna ahapụbeghị agwaetiti a ma lụọ nwoke ọ na-ahụghị n'anya, Marina na-agagharị ụwa maka ọrụ ya na NGO.
Dị ka mmiri maka Chocolate - Laura Esquivel
Un kpochapụwo na aha a site na Laura Esquivel, ya na ụdị ya kwekọrọ na sinima, nke hapụrụ anyị - wee gaa n'ihu na-ahapụ - ekpomeekpo kachasị mma. Otu na chocolate na otu na akụkọ ịhụnanya na-agaghị ekwe omume ihe dị n'etiti nwanne nne, onye protagonist, na Pedro. Ka anyị cheta na enwere usoro nhazi kwa isi na ọtụtụ anwansi.
N'etiti ájá na cinnamon - Eli Brown
Pirates na nri. Kedu ihe na-atọ ụtọ karịa nchikota a? Nịm ke 1819, ọ na-agwa akụkọ nke Owen wedgwood, osi nri a ma ama bụ onye a maara dịka "Siza nke Sauces", onye otu ndị ohi na-apụnara otu nwanyị, ndị Onyeisi Hannah Mabbot. Ọ ga-eme ka ị mata na a ga-azọpụta gị ma ọ bụrụ na Sọnde ọ bụla, na-ewetara gị ezigbo nri.
Ise na ise nke oroma - Joanne Harris
Harris bụkwa onye edemede nke Chocolat, Ya mere, nọgide na-agbakwunye ekpomeekpo na aha a nke kpakpando utu, nwanyị na-echeta uto na mmetụta ya nwata na France, n'etiti ihe isi ike nke agha, ma ọkachasị site na a ihe omume nke gosipụtara akara aka nke ndụ ya na nke ezinụlọ ya. Ugbua ntozu oke, Framboise ga-eche ihe gara aga ihu.
Achicha almọnd jiri ịhụnanya - Angela Vallvey
Anyị na-ahapụ oge gara aga ma kwụsị ugbu a na akụkọ a site n'aka Angela Vallvey onye protagonist bụ Fiona, nwa agbọghọ, nne na-enweghị nne, na-elekọta nna ya na-arịa ọrịa na onye enweghị ike isi nri. Na nsogbu nakwa na nri ntacharị ọnụ ma buru ụzọ, ihe ọ maara bụ ọgbọ. Ya na Alberto hụrụ ya n'anya kemgbe ndụ ya, onye laghachiri n'obodo ahụ. Ihe jọgburu onwe ya bụ na ọ malitela ịlụ Lylla, onye iro kacha mma anyị niile nwere. Mana onye nkuzi ụlọ akwụkwọ Fiona kpọrọ ya ka ọ rie nri ehihie otu ụbọchị ma mee ka nwanne mama ya bụ Mirna, onye isi nri oge ochie, gosi ya. Na ihe niile ga-agbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ 8 iji tinye ụtọ dị ụtọ ma dị ụtọ n'ọnụ gị
Akwụkwọ kacha mma Isabel Allende dere
Akwụkwọ kachasị mma nke Pérez-Reverte